Qoraal - Wikipedia
Kani waa maqaal ku saabsan "Qoraalka", haku khaldin "Qoraa".
Qalinku waa furaha qoraalka
Qoraal (; ) waa nidaam xarfo loo habeeyay si kala horeeysa taasi oo loo isticmaalo in lagu gudbiyo ama keydiyo fariin, warbixin, aqoon iyo akhbaar. Wax-qoridu waxay ka mid tahay isgaarsiinta dadka taasi oo ka turjunta luuqada, dareenka iyo macluumaadka dadka. Sida caadiga ah, qoraalku waa lamaanaha hadalka, sababto ah qoraalka ayaa hadal loo bedeli karaa ama hadal ayaa qoraal laga dhigi karaa. Sidaasi darteed ayaa wax-qoristu qeyb uga tahay aasaaska isgaarsiinta aadahama.
4 Qoraalo Kale
5 Linkiyo kale
Qoraalku waa astaamo ka samaysan xarfo kaasi oo kooxdii dad ahi isla taqaano isla markaana ku salaysan dhawaaqa luuqad. Tusaale ahaa, Af-Soomaaligu wuxuu leeyahay hab qoris u gaar ah; taasi oo ka bilaabanta alifbeet, xarfo, iyo ereyo la iskuxidhay. Sidoo kale, alifbeetku waa aasaaska dhamaan wax qorista far. Tusaale ahaan, Af Soomaaligu wuxuu leeyahay dhowr nooc oo Far Soomaali ah, laakiin waxaa si sharci ah loo isticmaala qaabka laatiiniga oo dowlada Soomaaliya sharciyeysay horaantii sanadihii 1970kii.
Qoraa Turki ah
Mahatma Gandhi oo wax Qoraya
Qoraa (; ) waa qofka allifa qora buugaagta sheekooyinka, kitaabada iyo riwaayadaha. qoraanimadu waa noocyo badantahay waxayna cuskantahay hibada wax qoraal ee dadka qaar ilaahay siiyo, oo lama oranayo cid walboo wax qortaa waa qoraa, saasoo ay tahayna qoraanida waxaa lagu kasban karaa aqoonta iyo wax barashada.
Qoraa wadartiisu waa Qoraayo, waxa la qoro waa Qoraal, meesha la dhigo waxa la qorayna waa Qor'ool (Maktabad)
Daabacaadaha oo boqolaal luqaddood ku qoran
How the Alphabet Was Born from Hieroglyphs Archived Abriil 29, 2010 // Wayback Machine — Biblical Archaeology Review
↑ Buugag iyo Qormo Dhigashada… (Jw.org)
↑ Daniels and Bright (1996), pp 92–96
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qoraal&oldid=224082"
Last edited on 16 Nofeembar 2021, at 23:05
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Nofeembar 2021, marka ee eheed 23:05.